Milatariga Mareykanka ayaa ku dilay 5 Al-Shabaab duqeyn cirka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Milatariga Mareykanka ayaa ku dilay 5 Al-Shabaab duqeyn cirka
Milatariga Mareykanka ayaa ku dilay 5 Al-Shabaab duqeyn cirka
Shan ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, oo ay ku jiraan hoggaamiyeyaasha bartilmaameedka u ah kooxda jihaad doonka ah, ayaa lagu dilay duqeyn ay ka geysteen Soomaaliya ciidamada Mareykanka, sida uu sheegay Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM).
Sida laga soo xigtay AFRICOM, weerarka cirka wuxuu ka dhacay agagaarka Saaxa Weyne Khamiistii. Qiimeyn hordhac ah oo ay sameysay AFRICOM ayaa muujisay in aysan jirin dad rayid ah oo ku dhaawacmay ama ku dhintay howlgalka walina kama hayno wax war ah oo cadeynaya inaan wax dad shacab ah wax ku noqon sida ay sheegeen iyago,
“Duqeyntan waxaa lala beegsaday hoggaamiyeyaal caan ah oo al-Shabaab ah oo fududeeya xaga dhaqaalaha maaliyadda, hubka, dagaalyahannada, iyo waxyaabaha qarxa. Mid ka mid ah waxaa looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa weerar hore oo ka dhan ah ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya, ”ayuu yiri Taliyaha Ciidamada Cirka ee Mareykanka Maj. Gen. Dagvin Anderson, oo ka tirsan ciidamada isku dhafka ah – Taliyaha Quartz.
Carqaladeena joogtada ah ee al-Shabaab iyada oo loo marayo weerarada joogtada ah waxay muujineysaa sida ay nooga go’an tahay la-hawlgalayaasheena. “
Kani waa hawlgalkii ugu dambeeyay ee ay fuliyaan militariga Mareykanka iyagoo la shaqeynaya dowladda federaalka Soomaaliya. Bilowgii bisha, laba duqeyn oo cirka ah oo lagu bartilmaameedsaday aagagga xagjiriinta ee agagaarka Qunyo Barrow ayaa lagu dilay saddex qof oo looga shakisanyahay maleeshiyada Al-Shabaab waxaana lagu burburiyey lix dhisme oo xarun ah.
Al-Shabaab ayaa dhowr sano dagaal kula jirtay dowladda dhexe ee Soomaaliya iyagoo isku dayaya inay shareecada Islaamka lagu maamulo dalka soomaaliya sida ay yagu sheegtaan.
Previous articleMid Kamid Ah Shirkadda Diyaaraddaha ee ugu Waaweyn Qaaradda Afrika oo Duulimaadyo ka Bilaabaysa Somaliland.
Next articleDiyaarada ciidan wadey oo ka degtey Beledweyne
Heshiis dhex maray beelo ku dagaallamay Ceel-Berde